Himalaya Dainik » घरभाडा नदिएको भन्दै वडा कार्यालयमा ता*लाबन्दी !
घरभाडा नदिएको भन्दै वडा कार्यालयमा ता*लाबन्दी !
वडाका वडाध्यक्ष बहादुर खड्काले वडा कार्यालयले प्रत्येक महीना घरभाडाबापतको रकम दिँदै आएको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कही घर नपाएको बेला मेरो घरभाडामा लिएर बस्ने अहिले भाडासमेत नदिएर अफिस सारेकाले तालाबन्दी गरेको हुँ, मेरो भाडा आए ताला खोल्छु ।”
वडा कार्यालयको भाडाबापतको मासिक रकम कर कट्टीबाहेक रु पाँच हजार २०० सम्झौता भएको बताइएको छ । –रासस
दैनिक नेपालमा खबर छ
प्रकाशित मिति ९ भाद्र २०७६, सोमबार ०५:००